1,16 SMS mmekọrịta
1,17 Send Group Ozi
SMS scheduler bụ ihe akpaghị aka ngwá ọrụ nke na-eziga ozi ederede i dere mgbe a ụfọdụ oge na ụfọdụ ugboro. Ọ na-enyere na-echeta ihe ndị dị mkpa ụbọchị na-egbochi gị na-echefu ụbọchị ọmụmụ, anniversaries gị nso na ndị hụrụ n'anya. Nnọọ dee a ozi na-azọpụta ya. Imeghe SMS usoro ihe omume ngwa na ịtọ ụbọchị na oge mgbe ị chọrọ izipụ ozi. Enweghị dịghị ihe ọzọ nchegbu si n'aka gị, ngwa ga-eziga gị zọpụta ozi kpọmkwem ụbọchị na oge dị ka setịpụrụ.
-Esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị Trending SMS usoro ihe omume ngwa-enyere gị aka ndokwa ederede ozi, dị na iOS na Android ngwaọrụ.
2. Ịtọ oge SMS: Send ya mgbe e mesịrị
3. Text Mgbe e mesịrị
5. SMS scheduler (Text mgbe e mesịrị)
7. Smart SMS ngụ oge
9. SMS họtara oge
Dị ka aha na-egosi, na SMS scheduler ngwa na-ahapụ gị ịtọọ oge ozi ederede na gị android ngwaọrụ. Ị nwere nhọrọ ịhọrọ ugboro nke na-ezipụ ozi, sitere na site ise ọ bụla nkeji awa ọ bụla. The ngwa mejupụtara ndị ọzọ bụ isi ozi na atụmatụ nakwa, ya bụ multiple SMS nnata, na-ahọpụta nnata site na kọntaktsị, na na.
Nke a bụ a zuru okè ngwa ka ịtọọ oge ozi na-enweghị ukwuu tụkọtara, na dabara nke ọma, ọ bụ dị na Google Play ụlọ ahịa na ọ na-eri.
Akwado os: Android
Free nke na-eri.
Dị mfe iji na a ọrụ enyi na enyi interface.
Nnọọ kpọmkwem banyere ụbọchị na oge.
Kọntaktị na mbụ okwu ole na ole-egosi na nnata igbe.
Ịtọ oge SMS: Send ya mgbe e mesịrị
Na ikike nke na-enyere gị site n'izite nzi ozi na a preset oge, ngwa-eme ezigbo arụ nke ntinye akwụkwọ SMSs maka gị. Ọ nwere ọmarịcha na aghara free interface ebe ị nwere ike obibi gị gbaa akwụkwọ ozi. Onye ọ bụla nke ozi na ị na-eziga tinye n'ọrụ a ngwa-azọpụta dị ka akụkụ nke gị ngwaahịa SMS ngwa, ya mere ọ dịghị mkpa ihe mere na-emesi n'elu ebe-achọpụta ozi gị.
Mara mma nke ukwuu ọrụ interface.
Nnọọ akpan akpan banyere ụbọchị na oge.
The ngwa na-azọpụta ndị ndokwa SMSes na ngwaahịa SMS ngwa; N'ihi ya, o nwere ike na-ehichapụ mmadụ na mberede.
A na ngwa adịghị akwado otutu asụsụ.
Text Mgbe e mesịrị
Text Mgbe e mesịrị ihe ọzọ na ngwa na-enye gị ohere iji eziga gị odide na a gasịrị oge na ụbọchị. Ihe niile ị na-eme ngwa na ite ziri ezi gị ngwaahịa SMS ngwa. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ a ozi na ị zitere iji ngwa a, ọ ga-abụ dị gị ngwaahịa ozi ngwa. Isi ihuenyo nke ngwa awade ka ịtọọ oge a ọhụrụ SMS ma ọ bụ na-ele ndị na-na i tinyeworị ndokwa. Enweta na onye ọ bụla n'ime na soro ntuziaka na ị ga-ọma na-aga.
Dị iche iche ndị ọzọ nhọrọ iche site SMS usoro ihe omume.
Mfe ọrụ interface.
Na a na ngwa kwa, ndị SMSes zọpụta na ngwaahịa SMS ngwa; na ya mere nwere ike ina ehichapu ya.
Ọ na-adịghị ịzọpụta zitere SMSes maka ọdịnihu akwụkwọ.
The Advanced SMS scheduler emesi ọ ga-enye gị ohere ka ntakịrị ka izipu ozi gaa nri ndị mmadụ n'otu n'otu na ziri ezi oge. Na anya ohere na a fabulous omume a na-ewere ọnọdụ gburugburu gị, nke a bụ ngwa ị ga-arụnyere na gị na gadget ozugbo. Ngwa pụta ìhè dị iche iche layouts maka ozi gị, n'ihi ya, gị nnata adịghị-Ịnọ nkịtị gwụrụ ịhụ otu ozi imewe na onye ọ bụla ozi ha na-na ha ngwaọrụ.
• Dị mma nke ukwuu ọrụ interface.
• dị iche iche ndebiri na formats izipu ozi.
• Akụkụ a pụrụ iche mkpu maka ndị niile dị mkpa ụbọchị zọpụta na Kalinda.
• Ebe ọ bụ, e nwere dị iche iche ndebiri na formats maka eziga otu SMS, o nwere ike mgbe ụfọdụ na-emegharị ahụ ziri ozi ma ọ bụ na nnabata.
• Ọ bụrụgodị mgbe eziga ndokwa SMSes, ha na-anọgide na nchekwa data na N'ihi ya, jiri nwayọọ nhazi gbapụrụ ọsọ.
• adịghị akwado otutu asụsụ maka ide ozi n'ekwe ntị.
SMS scheduler (Text mgbe e mesịrị)
The SMS scheduler (Text mgbe e mesịrị) ngwa nwere nnọọ pụrụ iche mma; nke bụ nkwado maka otutu asụsụ. Ya mere English adịghị ga-abụ na nne gị-ire na-enwe ike izipu ozi; ị nwere ike ugbu eji asụsụ ị na-ekwu okwu iji zipu ozi gị. Nke abụọ kasị mkpa atụmatụ nke ngwa bụ ya na-ahapụ gị na nkwado ma weghachite ndokwa ozi gị SD kaadị. Ọ bụrụ na ị na-ịgbanwee smartphones, a ngwa ga-eme ka ọ dịrị gị ka ị na-enwetaghachi ohere gị ndokwa ozi.
• Nke a ngwa nwere a nkwado maka otutu asụsụ.
• Ọ na-azọpụta niile zitere SMSes na SD kaadị maka ọdịnihu ojiji.
• Ebe ọ bụ na-azọpụta niile zitere SMSes na SD kaadị, na bụ ya mere ọ na-emepụta a otutu cache ebe nchekwa na cached data nke na-aṅụ a dum ọtụtụ nke ohere.
AutoText bụ kacha SMS usoro ihe omume ngwa n'ihi na iOS ngwaọrụ. Ị nwere ike ịtọọ oge ozi ederede izipu mgbe ị chọrọ, onye ị chọrọ. Mee ya na-echefu ya; a na ngwa na-eziga ozi gị na ekwentị gị anya ma ọ bụ ọbụna si mba! Ị nwere ike ịmepụta iche iche na ị na-agachi ịtọọ oge ozi, ọbụna eziga ederede ncheta onwe gị dị nnọọ mgbe ị kwesịrị ha.
Akwado os: iOS na Android
Na AutoText, ị nwere ike ngwa ngwa ike na ịtọọ oge gị SMSes na gị onwe gị ìgwè.
A otu akọrọ na ọ ihu ọma composes update gị mkpa ma kalenda mgbe ị na-achọ ya.
Adịghị akwado otutu asụsụ.
Nnọọ oké ọnụ.
Smart SMS ngụ oge
The SMS ngụ oge ngwa arụ ọrụ nke ọma na iPhone-enye gị ohere ịtọọ oge SMS na ọ ga-echetara gị banyere oge mgbe ị kpebiri iziga na SMS.
Akwado os: iOS
Nke a SMS scheduler nwere ike izipu ihe SMS "Na Ncheta" otú a ngosi e zigara ka iPhone na oge na ụbọchị. Ọ na-ekwe ka ị na-dezie scheduler SMS ma ọ bụ kagbuo ozi.
Ọ dịghị ọzọ aka.
Ị nwere ike ise oge nke a egwu, ma ọ bụ nke ọ bụla ọzọ ụdị nke arụmọrụ ma ọ bụ usoro ihe omume; iSchedule ka ọ dị mfe n'ihi na ị na-ewu ọ bụla ụdị oge, ebe ọ bụ na ị nwere ike mfe tinye ma ọ bụ wepụ awa, nkeji na sekọnd. N'ikpeazụ, unu nwere ike ịzọpụta gị schedules dị ka ederede-faịlụ maka ọdịnihu akwụkwọ.
iSchedule nwere ike akpaaka izipu ozi n'oge ugbu na ike ga-circled mgbe ụbọchị, ọnwa na ọbụna ọtụtụ afọ.
Na-akwado ìgwè na-eziga.
Nnọọ ezi na hassle free.
The ngwa na-akwụ ụgwọ na ya mere ụfọdụ ndị na-ala azụ n'ihi na ha nwere ike inwe otu usoro ihe omume ngwa ọdịnala n'ihi free.
SMS họtara oge
SMS Oge bụ ngwá ọrụ dị ike maka eziga ozi na Gburu. Mgbe ị na-eme atụmatụ iji ziga ozi na a na a gasịrị oge, dị nnọọ oghe SMS OGE, họrọ ya / ya nọmba ekwentị, ịtọọ oge oge, ma dee ihe ị chọrọ ikwu. Mgbe ahụ SMS OGE ga-echetara gị na ndokwa oge, ihe niile ị chọrọ ime bụ na ịpị Send bọtịnụ.
Ị nwere ike ịhọrọ ka izipu ozi na Gburu na a ndokwa oge ma ọ bụ ozugbo edezi.
Ị nwere ike ịtọọ oge multiple ozi na Gburu-eziga na dị iche iche oge iche iche.
Ndi ana-akpo nwere ike ota site asụsụ niile àgwà na iOS.
Tinyegharịa nzipu ozi ma ọ bụ mail.
Iji tinye ederede gị ndebiri, na-aguputa ndị mgbe edezi ozi / mail.
Na nkwado ma weghachite ma ọ bụ site iCloud.
Ọbụna mgbe-azọpụta SMS na n'ịhazikọta ya maka ezipụ, ị ga-nyere a ngosi na ya zipu ozi mgbe ndokwa oge na-abịa. N'ihi ya, ọ bụ omume na ị na-adịghị na-echeta na SMS aga unsent.
Atụmatụ bụ a nifty obere ngwa na ọ bụghị naanị-arụ ọrụ na SMS ozi, kamakwa na Facebook, Twitter, na Gmail ozi. Chọpụta, e nwere ndị ọzọ ngwa na interface na otutu ọrụ na nwere ihe atụmatụ karịrị nanị ozi usoro ihe omume, ma nke a bụ oké niile-na-otu ngwọta mgbe nanị ihe ị chọrọ bụ scheduler atụmatụ.
Atụmatụ ga gwa gị mgbe Android ndokwa ozi e zitere na i nwere ike kagbuo ọ bụla rue mgbe ozi na kwụ n'ahịrị.
Atụmatụ interface e mere na Holo ụkpụrụ n'uche, nke pụtara na ọ bụ dị ọcha na-egbu.
Emepụta a otutu cache data, nke n'aka nke na-erepịakwa a otutu ohere.
Top 15 video ka video converters maka Windows na Mac
Top 10 Free SMS nrụọrụ izipu SMS Online
10 Great-eji maka Old ntị na mbadamba
> Resource> Top List> Top 10 SMS scheduler Iji nyere gị aka Send ozi ederede Mgbe e mesịrị